Wasiirka Gaadiidka Soomaaliya oo booqday qaar ka mid ah shirkadaha Diyaaradaha soo saara ee Maraykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Gaadiidka Soomaaliya oo booqday qaar ka mid ah shirkadaha Diyaaradaha soo...
Wasiirka Gaadiidka Soomaaliya oo booqday qaar ka mid ah shirkadaha Diyaaradaha soo saara ee Maraykanka
USA-(SNTV)-Wasiirka Wasaaraadda Gadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya Mudane; Maxamed Cabdullahi Omaar, oo booqasho shaqo ku jooga Waddanka Mareykanka ayaa booqday, shirkadda Diyaaradaha sameysa ee Boeing xarunteeda ugu weyn Dunida ee fadigeedu yahay Seattle Washington.
Wasiirka ayaa waxaa halkaa ku soo dhaweeyay madaxda shirkadda Boeing , waxanay ka wada hadleen arrimo ay kamid tahay iibsashada Diyaarado ay Soomaaliya yeelato, tababaro iyo shaqaaleyn Dhallinayaro Soomaali ah.
Waxaa uu sidoo kale Wasiir Oomaar booqday Shirkadda, Uber Texi oo iyadana ay kawada hadleen in ay xarunteeda Africa saldig uga dhigaan Soomaaliya si ay fursado shaqo ugu abuurto Dhallinyarada Soomaaliyeed.
Xarumihii kale ee uu booqday Wasiirka Duulista Hawada ee Soomaaliya ayaa waxaa kamid ahaa Garoonka Diyaaradaha ee , Seatac Tacoma, ee Magaalada Seattle, Gobolka Washington.
Waxanay Madaxda Gegida Diyaaradaha ee Seatac Tacoma, ka wada hadleen mataaneynta Labada Garoon iyo sidii loo samayn lahaa wada shaqayn iyo khibrad is-dhaafsi howl-wadeennada Labada Garoon ee Seatac Tacoma iyo Aden Cadde International Airport.
Wasiir Oomaar, ayaa booqday rugta ganacsiga Gobolka Seattle, waxayna Madaxdii uu halkaas ugu tagay kawada haldleen qaabka loo wadaagi karo ganacsiga iyo sidii loo billaabi lahaa xiriir dhex maraya Labada dhinac.
Madaxda Shirgadaha sameeya Diyaaradaha iyo kuwa ganacsi ee uu booqday Wasiirka ayaa soo dhaweeyey firkadihii ay is weydaarsadeen iyagoo caddeeyey in ay il goonni ku fiirin doonaan Dalka Soomaaliya.
Wafdiga wasiirka ayaa waxaa ku weheliyey Xog-haya koowaad ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Washington DC, Mudane; Abdirahman Bashir, iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Seatlle.
Previous articleWasiirka Beeraha iyo Waraabka XFS oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya
Next articleGolaha Wasiirrada K/Galbeed oo yeeshay kulankoodii ugu horreeyay